Fomba fambolena sy fiompiana finfish | Fiaretana haran-dranomasina
Fomba fiompiana sy fiompiana finfish
Fampihenana ny fampihenana
Fitantanana ny fampiasana fialam-boly
Mitantana ny risika amin'ny karazan-javamaniry
Fitantanana ireo mpandroba Coral
Fiarovana ny Herbivores
Fampihenana ny fiantraikany amin'ny tany
Ireo faritra voaaro an-dranomasina
Mpa Management MPA
Fiaraha-mitantana amin'ny fitantanana
Fifanarahana momba ny fiarovana ny tontolo iainana
Torolàlana ho an'ny mpitsabo an-dranomasina an'ny mpitsabo
Mitantana ny korontana
Aretina manimba aretim-pototra
Mitantana ny fanamafisana ny ranomasim-be
Inona no atao hoe famerenana amin'ny laoniny?
Andraikitry ny famerenana amin'ny laoniny
Inona no atao amin'izao fotoana izao?
Tetik'asa momba ny tetikasa
Manapa-kevitra ny amin'ny famerenana amin'ny laoniny
Fampiasana amin'ny famerenana amin'ny laoniny
Fikirana & fomba fiasa
Fanaraha-maso & Evaluation
Fanamafisana ny substrate
Famerenana haingana sy famerenana amin'ny laoniny ny vonjy taitra
Ireo habaka mifindra monina any
Fiompiana anaty rano
Fampidirana momba ny fiompiana anaty rano
Toetran'ny fiompiana anaty rano
Fiantraikany sy fihenan'ny tontolo iainana
Fiantraikany amin'ny stock stock
Vokatry ny toeram-ponenana
Fandotoana ny rano
Ny fahasalaman'ny aretina sy ny trondro
Fitsipika hanohanana ny fitantanana maharitra
Fanombanana ny fiantraikan'ny tontolo iainana
Fanakaikezana ny fitantanana ny faritra
Fandrafetana ny fiarahamonina
Ny fomba fisainana fisoloana fisakafoanana
Ny maha-zava-dehibe ny haran-dranomasina
Fitantanana ny haran-dranomasina
Fitaovana fitantanana ny Fishery
Fanaraha-maso sy fampiharana ataon'ny mpanjono
Rafitry ny seafood Supply Chains
Zava-tsarotra atrehin'ireo mpanangom-bokatra
Tetik'ady ho fampandrosoana
Fandotoan'ny rano maloto
Fampidirana ny loto amin'ny rano maloto
Rafitra fitsaboana efa misy
Fiantraikany amin'ny fiainana an-dranomasina
Fiantraikany amin'ny fahasalaman'ny olombelona
Ny fanaraha-maso ny kalitaon'ny rano
Vahaolana momba ny fitantanana misongadina
Fiaraha-miasa sy fifandraisana
Fahatsapana lavitra sy fanaovana sarintany
Fampidirana ny Sensing Remote
Inona no atao hoe Remote Sensing?
Fanamby noho ny fahatsapana lavitra an-dranomasina
Sary mankany amin'ny Sarintany
Sarintany amin'ny mizana miavaka
Sarintany amin'ny ambaratongam-paritra
Sarintany momba ny nosy
Sarintany momba ny haran-dranomasina
Sarintany an-tsarintany Coral Colony
Ny fampifanarahana ny toetr'andro eo amin'ny fiarahamonina
Fanambarana momba ny fiovan'ny toetrandro
Fahalemena sy fampifanarahana
Fitaovana fampifanarahana momba ny fihariana
Fitaovana fanomanana sy fitantanana asa aloha eo an-toerana
Fahasamihan'ny Fahasamihafana sy ny Capacity Analysis
Miresaka momba ny fikorontanan'ny toetrandro
Mitantana ny faharetana ara-tsosialy
Blue Benefit Carbon
Fanombanana ny lanjan'ny karbaona
Fifandraisana amin'ny politikam-pirenena
Misy karazany maro ny fomba fambolena ampiasaina amin'ny fiompiana trondro, anisan'izany ny famerenana amin'ny laoniny ny tany, ny tanky mivezivezy, ny tranom-borona akaikin'ny morona, ny dobo amoron-tsiraka ary ny tranom-borona eny ivelany. Ny fifantohan'ity modely ity dia ny tranom-borona sy penina satria io fomba io dia matetika ampiasaina amin'ny fiompiana trondro anaty faritry ny haran-dranomasina.
Mba hananana fahalalana feno momba ny fiompiana trondro dia zava-dehibe ny mahatakatra ny tsingerin'ny famokarana hazandranomasina hatramin'ny hatchery ka hatrany amin'ny cages grow-out. Ny trondro broodstock dia matetika no angonina avy any an'ala ary ampiasaina hamokarana rantsan-tànana izay atao amin'ny stock cage. Raha vantany vao mamokatra zana-kazo azo atao ny trondro olon-dehibe, dia angonina ny atody ary atsofoka mandra-pahatongan'ny foy ny olitra. Ireo olitra ireo dia ampiarahina amin'ny fitambarana feed mivantana (rotifers, artemia, copepods) mandra-pahafatiny lehibe ka hafindra ao amin'ny akanin-jaza. Raha vantany vao any amin'ny akanin-jaza dia omena sakafo artifisialy ireo trondro mandra-pahatongany any amin'ny habe mety hitaterana azy.
Ny famokarana trondro hatchery dia mazàna no tavoahangy ho an'ny karazana vaovao, satria lehibe kokoa noho ny famatsiana ny tinady. Ohatra, tany Palau tamin'ny taona 2019, ny habetsaky ny endasina bitro notakin'ny tantsaha dia lehibe kokoa noho izay azon'ny National Aquaculture Center omena azy ireo, ka nanery ny tantsaha hametraka trondro vitsy noho izay nilainy.
manokatra fisie IMAGE
Fantsom-pambolena anaty rano ambanin'ny tany izay misy ny fanodinana aorian'ny fiotazana, ny fizarana, ny fanodinana misy lanjany, ny varotra ary ny fivarotana lehibe. Loharano: misokatra amin'ny varavarankely vaovaoMankany amin'ny revolisiona manga: mampikatso ny fampiasam-bola tsy miankina amin'ny rafitry ny famokarana aquaculture maharitramanokatra fisie PDF . Sary © Alison Bradley
Fomba kolontsaina saka
Ny kolotsaina tranom-borona farany dia azo ampiasaina amin'ny karazany maro karazana ary amin'ny ankapobeny dia manana vidin'ny tontolo iainana kely kokoa noho ny farihy amoron-dranomasina. Ireo dobo, miaina an-tanety fa tsy anaty tontolo an-dranomasina, dia mifaninana mivantana amin'ny habakabaka ary mpamily ny fiantraikany ratsy amin'ny tontolo iainana amin'ny toeram-ponenana amoron-dranomasina mora tohina, toy ny ala honko sy ny tohodrano.
Ny kolontsaina tranom-borona sy penina dia karazana fefy izay ny biby fiompiana dia voahidy ao anaty faritra amin'ny alàlan'ny rafitra iray, mazàna harato na tranom-borona. Ny tranokala dia manana harato amin'ny lafiny rehetra, amin'ny tranga sasany na dia ny ambony aza mba tsy hidiran'ny mpiremby ao anaty tranony. Afaka mampiasa ny fanambanin-dranomasina ho toy ny fanambanin'ny penina ny penina ary misy harato fotsiny eo amin'ny sisiny.
Cages sy penina dia natsangana tamin'ny karazana fitaovana samihafa. Any Azia, ny toeram-pambolena kely na antonony dia nampiasa fitaovana toy ny volotsangana sy hazo nandritra ny am-polony taona maro; mifamadika amin'ireo fitaovana vaovao toy ny nylon, plastika, polyethylene, ary vy vy, izay na dia lafo kokoa aza ny vidiny, dia manome fe-potoana lava kokoa ary mamela ny fifanakalozana rano tsara kokoa.
Any amin'ny faritra amoron-tsiraka ny famolavolana izay matetika ampiasaina dia tranom-borona izay namboarina niaraka tamin'ny fitaovana avy any an-toerana (hazo na volotsangana) izay mitsingevana noho ireo fitaovana mampientanentana (amponga feno vovo-drivotra na styrofoam). Ny harato fibre synthetic dia ahantona amin'ny lampihazo mba ho lasa vala mitazona ny trondro.
Ohatra amin'ny penina amoron-tsiraka any Palau. Sary © Julio Camperio sy Jack Lin
Ny endrika tranom-borona sy penina amin'ny ankapobeny dia toradroa, mahitsizoro, na boribory ary azo ampiasaina amin'ny tontolo somary marivo na lalina.
Tavoahangy vita amin'ny silila dia matetika ampiasaina amin'ny fiompiana salmona. Sary © Havia: FAO / SP Lall, Afovoany / Ankavanana: Melissa D. Smith
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoMankany amin'ny Revolisiona Mangamanokatra fisie PDF
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoInnovaSea